Galgaduud: Dablay hubaysan oo rasaaseeyay gaari xamuul ah – Radio Daljir
Galgadud,Jan 15 -Dablay hubaysan ayaa xalay xilli dambe oo habeenimo ah waxaa ay rasaas ku fureen gaari nooca rakaabka qaada, kaasi oo kasoo ambabaxay magaalada Gaalkacyo,kuna wajahnaa magaalada Muqdisho.
Ugu yaraan 9 ruux oo ku dhaawacmay rasaasta lagu furay gaariga ayaa lagaarsiiyay cisbitaalka degmada Dhuuso-mareeb ee xarunka gobolka Galgaduud,waxaana saraakiisha caafimaadku noo xaqiijiyeen in dadka dhaawacyada qaba ay isugu jiraan haween iyo carruur.
Saraakiisha caafimaadka ee cisbitaalka Dhuuso-mareeb waxaa ay wadaan latacaalidda xaaladda caafimaad ee dadka dhaawacu soo gaarey,kuwaas oo dablay aan la garanay ay rasaas ku fureen.
Mid kamid dhakhaatiirka cisbitaalka ayaa Radio Daljir u sheegay in qaar kamid dadka dhaawacyadu soo gaareen ay ku jiraan xaalad adag,ayna dhaawacyadoodu culusyihiin.
Kooxaha hubaysan ee rasaasta la beegsada gawaarida rakabaaka ah ayaa waxaa ay kusoo badanayaan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya,waxaana jirta walaac ay arintaa ka muujinayaan wadayaasha gaadiidku.